It is me. Ko Niknayman.: စက်ရပ် သတင်း။
ရန်ကုန်သံတမာန်အသိုင်းဝိုင်းရပ်ကွက် အရေးပေါ်သတင်းအရ စင်္ကာပူဆေးရုံ က လေယာဉ် တစီး အထူးကု ဆရာဝန်များ ( Highly Specialized Doctors ) နှင့် ကရိယာများအပါအ၀င် အရေးပေါ် ဆေးအဖွဲ့ သည် မြန်မာ ပြည်သို့အရေးပေါ်ပျံသွားသည်ဟုသတင်းရပါသည်။ လေယာဉ်ပျံသည် ယနေ့ရန်ကုန်စံတော်ချိန် ည ၁၀ နာ ရီ တွင် နေပြည်တော် သို့့ဆိုက်ရောက် ကြောင်း သိရသည်။
သံတမာန်အသိုင်းအ၀ိုင်းအဆိုရ သန်းရွေ အသည်းအသန် ဖြစ်နေပြီဟု ဆိုပါသည်။ လှုပ်ရှားလို့ တောင်မ ရဟုသိရသည်။
source/ ကိုမိုးသီးဇွန်၏ http://komoethee.blogspot.com/2008/03/blog-post_13.html မှ သတင်း ကိုလက်ဆင့်ကမ်းတာပါ
Posted by အာဇာနည် at 9:27 PM